Blackjack yenye kwekhadi imidlalo ethandwa kumaziko okungcakaza --based ilizwe, online eziziimobhayili. Unakho ukudlala Blackjack imali ngenene mFortune mfono Casino. The game has simple rules that are easy to learn, kodwa ke ifuna ubuchule ukuze ukudlala ngempumelelo. Oku kwenza Blackjack babethandwa andilociko, kwakunye abadlali abaziingcali.
Dlala Blackjack kule Casino wethu ezicetyiswayo
Indlela Dlala Blackjack
Unakho ukudlala Blackjack apha mFortune Casino ukuzonwabisa okanye imali yokwenene. Uyakwazi bhejele kuba nje 10p.
Injongo umdlalo Blackjack kukuzuza isandla kufutshane 21 ngaphezu kumthengisi, ngaphandle bangaweleli (Bust). Wakuba bahambisa ozithembileyo, uya kuqwalaselwa amakhadi amabini ajongane kwaye umthengisi uya kuqwalaselwa elinye ikhadi ubuso phezulu enye ubuso ikhadi phantsi. ngoku kuya kufuneka umdlali ukuba isigqibo indlela yokudlala ngesandla. Unako ukuma ukuphelisa lithuba lakho; betha ukufumana ikhadi enye ngaphezulu; kabini phantsi amakhadi zakho zokuqala ezimbini kabini bet yakho uze ufumane ikhadi enye ngaphezulu; ukwahlula isandla sakho ozithembileyo ezibini ezahlukeneyo ukuba amakhadi amabini twatse amakhadi akho zokuqala ezimbini okanye uthathe inshorensi ukuba-ikhadi phezulu umthengisi yeyona yinto Ace.
Zonke amakhasi ixabiso kwaye ezi nqobo ezidityaniswe kunye nesiphumo ixabiso elipheleleyo isandla sakho. Amakhadi zimbini ezilishumi ezinexabiso ubuso babo; amakhadi ubuso abe nexabiso ezilishumi Aces kuba ixabiso omnye okanye elinanye, kuxhomekeka kwixabiso eseleyo esandleni sakho. Manqaku ngesandla liphezulu yaziwa ngokuba Blackjack kwaye oku ngesandla ikhadi-ezimbini esenokuba Ace kunye nekhadi exabisa 10.
Xa ilithuba lakho uye waphela (uye Bust okanye ume), kumthengisi udlala isandla sakhe kunye nezandla zithelekiswa nawe ihlawulwe nayiphi axhaphaze.